Banaanbax loogaga Soo horjeedo South Africa oo Maanta ka dhacay Guriceel – SBC
Banaanbax loogaga Soo horjeedo South Africa oo Maanta ka dhacay Guriceel
Deegaanada Waaweyn ee dalka Soomaaliya waxaa ka sii soconaya banaanbaxyada waaweyn ee loogaga soo horjeedo dhibaatooyinka Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ganacsiga u jooga dalkaasi South Africa loo geysto.
Degmada Guriceel ee ay ka arimiyaan Masuuliyiinta Ururka Culimaaudiinka Ahlusuna waljamaaca ayaa maanta waxaa ka dhacay banaan bax aad u balaaran oo ay dadka dega isku isku mid ah ugu soo gudbinayeen shacuurtooda ku aadan leynta dadkooda loogu geysanayo dalka koonfurta Afrika.
Masuuliyiin ka tirsan Culimaaudiinka Ahlusuna ee maamula deegaankaas ayaa kala qeyb galay dadka banaan baxayay, waxayna goobta kula hadleen shacabka iyagoo si kulul uga hadlay dhibaatooyinka arxandarada ah ee loo geysto Soomaalida Koonfur Afrika.
Dadweynaha ayaa dhankooda soo bandhigay hal ku dhigyo ay ku cambaareynayeen South Africa, iyagoo ku qeylo dhaaminayay ha dhacdo South african, iyo ereyo kale oo ka soo baxayay dad aad u tiro badan oo careysnaa.
Si isku mid ah dadweyne aad u tira badan ayaa iyana labadii maalin ee la soo dhaafay ku banaan baxay Magaalooyinka Muqdisho Caasimada Soomaaliya iyo garoowe Caasimada Puntland kuwaas oo muujiyay caradooda ka dhanka ah dalka Koonfur africa.